Fironana indostrialy: ny mofomamy dia ampy, mbola tsy afaka misakafo feno, ahoana ny fampitomboan'ny mpanamboatra fifandraisana optic-News-Qingdao teknolojia photonic co., Ltd
Fibre Optical Coupler Series
Andian-tsarimihetsika Transceivers optika
Switch optika fibre
Andian-tsarimihetsika optika / Attenuator
FC fibre mpampitohy
Mpampitohy fibre SC
Mpampitohy fibre LC
Mpampitohy fibre ST
MU fibre optic connector
Mpampitohy fibre E2000
Patchcord fibre optique MPO
Jumper mifono vy
Pigtail tsy tantera-drano
Tariby miorina amin'ny base base
Fibre Optical 86-box an'ny fibre
Tafiditra SC Quick Connector
Boaty fampielezana Fibre Optical
Home>Vaovao > Vaovao deatil
Fironana amin'ny indostria: ny mofomamy dia ampy lehibe, mbola tsy afaka misakafo feno, amin'ny fomba ahoana no mampitombo ny vola miditra ny mpanamboatra fifandraisana
Views:94 Fotoana famoahana: 2020-08-22
Vao haingana izay, China Mobile dia nanambara ny kandidà nandresy tamin'ny fanangonana tariby optika ankapobeny tamin'ny 2020-2021. Changfei dia nibata ny toerana voalohany tamin'ny fizarana 9.44%, narahin'ny fortis, Hengtong, Fiberhome ary ireo goavambe hafa, izay nahatratra ny 70% n'ny baiko.
Manoloana ny vidiny ambany vaovao, na dia eo am-piomanana mialoha aza ny psikolojika, saingy mbola mikorontana hatrany ny indostria. Isan-taona ireo mpandraharaha telo lehibe amin'ny fanangonana tariby optika ankapobeny no loharanom-bola lehibe ho an'ireo mpanamboatra lehibe, mifototra amin'ny traikefa taloha, China Telecom sy Unicom dia tsy maintsy manaraka ny paikadin'ny fetran'ny vidin'ny finday, mampihena be ny fetra farany ambony amin'ny vidin'ny bidding.
Noho ny vidin'ny fampiasam-bola goavambe amin'ny dingana voalohany amin'ny fananganana tambajotra 5G, ireo mpandraharaha telo dia tsy maintsy nampihena ny vidiny tamin'ny vidin'ny vidiny tsy miova eo ambanin'ny fiantraikan'ny tombam-barotra ambany ankehitriny. Ny totalin'ny kilometatra an'ity fanangonana ity dia nitombo hatramin'ny 105 tapitrisa kilaometatra ka hatramin'ny 119.2 tapitrisa km, fitomboana 13% isan-taona. Na dia lehibe kokoa aza ny refy, saingy ny vidiny dia mitohy milatsaka mafy, hatramin'ny tampon'ny taona lasa izay mihoatra ny 60 yuan mivantana hatramin'ny 20 yuan, dia azo tapahina amin'ny antsasaky ny fihenam-bidy 30% hafa.
Ankoatr'izay, China Telecom sy China Unicom dia nahavita fifanarahana fiaraha-miasa mifandraika amin'izany mba hampiasa amin'ny fomba feno ny tombam-bidin'izy ireo isam-paritra, hahatsapa ny fananganana sy fizarana ireo tobin'ny toby 5G manerana ny firenena, ary hitsitsy ny vidin'ny fampiasam-bola mialoha. Ny radio, Televiziona ary finday any Sina koa dia nifanome tànana namorona lamina stratejika "2 + 2" eo amin'ny sehatry ny varotra 5G.
Ny hetsika toy izany dia tsara hijerena ny loharanom-pahalalana sy ny vidin'ny fananganana, saingy tsy vaovao tsara ho an'ireo mpanamboatra tariby fibre optika lehibe, ny volan'ny orinasa sy ny tombom-barotra no hisy fiantraikany amin'ny lafiny iray. Raha fintinina, na dia ny onja fotodrafitrasa vaovao aza dia nampiditra hery lehibe tao amin'ny indostrian'ny serasera optika, ny mpanamboatra lehibe dia tokony hanangana fahaiza-manao miavaka sy hamorona fifaninanana fototra amin'ny alàlan'ny fahaizany ara-teknika tany am-boalohany, ary hikatsaka ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fanavaozana, hahafaha-mifanatrika tsara kokoa amin'ny fotoana sy fanamby amin'ny vanim-potoana 5G.
Eo ambanin'ny fanamboarana 5G, Qingdao Guangying dia nandroso ary nivoatra tamim-pahavitrihana, namorona rafitr'asa indostrialy misy fizarana onja pasifika ho toy ny singa lehibe sy PLC, mpizara fizara optique sy vokatra optique optique ho singa fanampiny. Antenaina hahatratra ny tahan'ny fitomboana 10% ny taha-pivoarana amin'ny taona 2020.
Prev HIVERINA NEXT
47 Tokyo Road, Free TradeZone, Qingdao, Shandong, Sina
+ 86-0532-86768576 （Common）